တစ်ခုကအယူးဘားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကပိုင်ဆိုင်မှု (ဂုဏ်သတ္တိများ) နှင့် liabilities ပိုင်ဆိုင်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်မိသားစုအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ယူးဘားပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုဖန်တီးပါ။
တရားဝင် entity ဖြစ်ခြင်းနေစဉ်, တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ရိုးအမြစ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကဲ့သို့သောအခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။ တစ်ဦးကဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့မြို့တော်ရှယ်ယာသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခွဲတမ်းသို့ခွဲခြားမပေးပါ။ တစ်ဦးကဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။
အယူးဘားရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်း 1988 ၏ Ordinance ဖွဲ့စည်းရေး, ဥပဒေရေးရာလှုပ်ရှားမှုများ, ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် (ကုသိုလ်ဖြစ်နှင့် Non-ကုသိုလ်ဖြစ်) အားလုံးအမြစ်ကို၏ရပ်စဲအုပ်ချုပ်။
အယူးဘားတောင်ပိုင်းကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အတွင်းဗင်နီဇွဲလား၏ကမ်းလွန်တွင်တည်ရှိသည်ဒတျချြကျွန်းများတစ်အုပ်စုကနယ်သာလန်အန်တီ၏ဟောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနယ်သာလန်အန်တီအသင်းအဖွဲ့ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ 2010, ကတည်းကယူးဘားနယ်သာလန်၏နိုငျငံတျောဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နယ်သာလန်, စိန့် Maarten နှင့်ရူရာကျွန်းများ၏နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အများဆုံးခရီးသွားဧည့်နှစ်ပေါင်းများစွာအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံကနေလာအဖြစ်အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏လူဦးရေရဲ့အများစုအားဖြင့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
• နိုင်ငံခြားရေးပါဝင်ဖြည့်စွက်: တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများနိုင်ပါတယ်။
• အခွန်ကင်းလွတ်: အတော်များများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများစုစုပေါင်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိကြသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့်ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအခွန်အခြားဘာသာရပ်မိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: တစ်မိသားစုရဲ့ရေရှည်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများအတွက်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောမော်တော်ယာဉ်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: Foundations အနာဂတ်အကြွေးကနေတည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ယင်း၏သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများတစ်ဦးအဖြစ်, အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်စာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်နိုင်ပါတယ်။
တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ယူးဘားများတွင်မဆိုအခြားဥပဒေရေးရာ entity ၏အမည်ကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမည်အားရွေးချယ်ရမည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နာမညျကိုကဥပဒေရေးရာ entity အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားဖို့စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။ အင်္ဂလိပ်အယူးဘားရဲ့သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တိုက်မြစ်အဘို့ဒတျချြစကားလုံးကိုလည်းအခြေခံအုတ်မြစ်၏အမည်ကိုအဆုံးတွင်အသုံးပြုရသောတစ်ဦး "Stichting" ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်များအသင်းတစ်ခုဆောင်းပါးများ (ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ) ပါဝင်သောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အကငျြ့ကိုခေါ်ရေးသားထားသော notarized ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားသည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အကျင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အမည်, ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ပယ်ခန့်အပ်ရန်အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်များပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းပညတ်တရားအားဖြင့် 1988 အတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းတွင်မှတ်ပုံတင်မည်စီမံခန့်ခွဲကတည်းကသည့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏ယူးဘားကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသည်။ တိုင်းယူးဘားတိုက်မြစ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်မည်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါအချက်အလက်များကို Register အတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းတွင်နှင့်အတူတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်သည်:
• Foundation ၏နာမကိုအမှီ (ပြဌာန်းချက်များနှင့်အတိုကောက်ပုံစံ;
• Foundation ၏လိပ်စာ,
•အစည်းအရုံး၏ဆောင်းပါးများ (ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ) ၏ Copy ကူး။
ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ထူထောင်အမည်, ရည်ရွယ်ချက်, မှတ်ပုံတင်နံပါတ်, ရက်စွဲ, နှင့်ပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်မန်နေဂျာ: အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကမှတ်ပုံတင်မည်အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်ရိုးအမြစ်နှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးဆုံးဒေတာ်တစ်ဦးထုတ်ယူထုတ်လုပ်သည်။ ဒါကတစျခုလုံးကိုအများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်မယ့်အများပြည်သူစံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏တည်နေရာများ၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ဖော်ပြချက်များ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေဆင်တူသည်။ သူတို့ကဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များခန့်အပ်လျော်ကြေးငွေ, သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်တာဝန်များနှင့်အတူဖယ်ရှားလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုအပါအဝင်အခြေခံအုတ်မြစ် operating ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စည်းမျဉ်းများကိုပေး။ အဆိုပါချိန်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအခွင့်အရေးများလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထို့အပြင်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့သက်တမ်းနဲ့ဘယ်လိုပျော်သို့မဟုတ် Terminal ပါဝင်သည်များ၏ကြာချိန်။
ရိုးအမြစ်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့သောမြို့တော်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမယ့်အစားတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့တည်ထောင်သူလွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှု (ဂုဏ်သတ္တိများ, ရန်ပုံငွေများ, etc) အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏အချိန်မှာအခြေခံအုတ်မြစ်ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်နှင့်အနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အခြေခံအုတ်မြစ်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုများဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိသောနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ပြည့်စုံအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအားပေး, ယူးဘားတွင်တည်ရှိသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်ပြောင်းရွှေ့ကြသည်မဟုတ်။
တိုက်မြစ်၏ဖန်ဆင်းရှင်ကိုအခြားတိုင်းပြည်များ၏နိုင်ငံသားဖြစ်နှင့်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ယူးဘားပြင်ပဘယ်နေရာမှာမဆိုအသက်ရှင်နိုင်သူ "ကိုတည်ထောင်သူ" ဟုခေါ်သည်။
တစ်ဦးအခြေခံအုတ်မြစ်ကနေအကျိုးအမြတ်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များယူးဘားထက်မဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်နိုင်ငံသားများဖြစ်နှင့်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ယူးဘား၏အပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်နိုင်သူကို "အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ" ဟုခေါ်ကြသည်။
ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုတက်ကြွစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နေသည်ဆိုပါက၎င်း၏အမြတ်ငွေအပေါ် 25% ၏ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဝင်ငွေ၏သတင်းရင်းမြစ်ကအောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကနေလာမယ်ဆိုရင်သို့သော်အခြေခံအုတ်မြစ်လုံးဝအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်:
(က) သို့ရာတွင်စုစုပေါင်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သူတို့သာရှယ်ယာအဘယ်သူ၏ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုအယူးဘားရဲ့ 25% ထက် ပို. မြင့်မားသည်နိုင်ငံများမှာတည်ရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူရှိသောအခါ, တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည် 12.5 ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုနှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်း% အများဆုံးနိုင်ငံများပါဝင်သည်သောအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီသည်ဟုဆိုလိုသည်။
(ခ) 12.5% ထက်နိမ့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းထားများနှင့်အတူသူတို့အားနိုင်ငံများအဘို့, ခြွင်းချက်တခုကိုစုစုပေါင်းခွဲဝေ၏ထက်နည်း 5% အထိအခြေခံအုတ်မြစ်ငွေပမာဏအားဖြင့်လက်ခံရရှိသောခွဲဝေတူညီတဲ့အခွန်နှစျတှငျရရှိခဲ့သညျ့အခါတည်ရှိ။
•တွေမှာ Passive ဝင်ငွေခွန်: အိမ်ခြံမြေသို့မဟုတ်သာမန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်လည်းတူသော passive ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှရရှိသောအားလုံးဝင်ငွေ။
•ဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများ: တတိယပါတီများမှမှပုဂ္ဂလိကချေးငွေပေးကာငွေကြေးကုမ္ပဏီငျြးပွညျ့မီအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မ။ ဤသည်ငှားရမ်းခွင့်, ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ခြံရန်ပုံငွေန်ဆောင်မှုများပေးပါဝင်သည်။
• Intellectual Properties ကိုလိုင်စင်ရ: တစ်မူပိုင်ခွင့်, မူပိုင်ခွင့်, ဒါမှမဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့စက်မှုသို့မဟုတ်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးလိုင်စင်နှင့်ငှားရမ်းဝင်ငွေနှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson စုဆောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်2စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်
တစ်ခုကအယူးဘားပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, နှင့်အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။